Dhaawacyadii Qaraxii shalay ka dhacay Dhuusamareeb oo loo qaaday Itoobiya
Guriceel:-Waxaa saaka loo qaaday qaar ka mid ah dhaawacyadii qaraxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobalka Galgadúud dalka Itoobiya waxaana Diyaaradu ay ka qaaday magaalada Guriceel. Dhaawacyada saaka loo qaaday dalka Itoobiya waxaa ka mid ah Axmed C/salaan Xaaji Aadan iyo xildibaan C/risaaq Isaaq Biixi iyo xildhibaan Xuseen Samatar .
Wararka ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Guriceel ayaa sheegaya in uu kordhay khasaarahii ka dhashay qaraxii shalay ka dhacay Degmada Dhuusamareeb waxaana ay dhimashadu gaartay ilaa 7qof halka dhaawaca uu sii marayo ilaa 20 kale.
Siyaasiga Axmed C/salaan Xaaji Aadan ayaa waxaa uu dhaawac culus uu ka gaaray mid ka mid ah labadiisa indhood waxaana saaka loo qaaday magaalada AdisAbaba ee xarunta dalka Kenya. Afhayeenka Al shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa sheegtay qaraxii shalay ka dhacay Degmada Dhuusamareeb wuxuuna sheegay in ay laayeen Saraakiil Itoobiyaan ah iyo Murtadiin .
Guddoomiyaha golaha fulinta ee Ururka la baxay Ahlusunna Sheekh Maxamed Yuusuf Xeefoow ayaa wacad ku maray in ay ka aargoosan doonaan Ururka Al-Shabaab wuxuuna sheegay in maxkamad ay la tiigsan doonaan.
Xaaladda Guud ee Degmada Dhuusamareeb ayaa saaka deggan waxaana si caadi ah u socda Ganacsiga iyada oo ay hadalheynta ugu badan ee magaalada ay tahay qarxii shalay iyo cida fulisay.